China Resin plugging hole Microvia Immersion volafotsy HDI miaraka amin'ireo mpanamboatra fandavahana laser sy mpamatsy | Kangna
Resin plugging hole Microvia Immersion volafotsy HDI miaraka amin'ny fandavahana laser
Min kely habe: 0.10mm
Ny hatevin'ny birao vita: 1.60mm
Loko sarontava: manga
Fotoana fitarihana: 15 andro
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-20 ka hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21, ny indostrian'ny electronics circuit board dia namoaka ny vanim-potoana fampandrosoana haingana ny teknolojia, nohatsaraina haingana ny teknolojia elektronika. Amin'ny maha-indostrian'ny birao fanaovana pirinty azy, miaraka amin'ny fivoarany miaraka, dia afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa tsy tapaka. Miaraka amin'ny habetsaky ny vokatra elektronika kely sy maivana ary manify, ny tabilao vita pirinty dia nanamboatra tabilao miovaova, tabilao mihetsiketsika, takelaka boriborin'ny jamba milevina sns.
Raha miresaka momba ny lavaka jamba / milevina dia manomboka amin'ny multilayer nentim-paharazana isika. Ny firafitry ny tabilao misy fantsona marobe dia misy ny fizaran-tany sy ny faritra ivelany, ary ny fizotry ny fandavahana sy ny fitrandrahana ao anaty lavaka dia ampiasaina hahatratrarana ny asan'ny fifandraisana anatiny amin'ny faritra tsirairay. Na izany aza, noho ny fitomboan'ny haavon'ny tsipika, ny fomba fonosana amin'ny ampahany dia havaozina tsy tapaka. Mba hahafahana mametra ny faritra misy ny faritra boribory ary mamela ny ampahany bebe kokoa amin'ny fampisehoana, ankoatry ny sakan'ny tsipika manify kokoa, ny aperture dia nidina avy amin'ny 1 mm an'ny volo jack DIP ka hatramin'ny 0.6 mm an'ny SMD, ary nihena hatrany ambany noho ny 0.4mm. Na izany aza, ny faritra amboniny dia mbola hohaonina ihany, noho izany, ny lavaka milevina sy ny lavaka jamba dia mety hiteraka. Ny famaritana ny lavaka milevina sy ny lavaka jamba dia toy izao:
Ny lavaka mamaky eo anelanelan'ny sosona anatiny, aorian'ny fanindriana, dia tsy tazana, noho izany dia tsy mila hibodo ny faritra ivelany, ny lafiny ambony sy ambany amin'ny lavaka dia ao amin'ny sosona anatiny, amin'ny teny hafa, milevina ao amin'ny BIRAO, BIRAO
Izy io dia ampiasaina amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny sosona amboniny sy ny sosona anatiny iray na maromaro. Ny lafiny iray amin'ny lavaka dia eo amin'ny lafiny iray amin'ny solaitrabe, ary avy eo mifamatotra amin'ny atin'ny tabilao ny lavaka.
Ny tombony amin'ny takelaka lavaka jamba sy milevina:
Amin'ny haitao tsy loaka perforating, ny fampiharana ny lavaka jamba sy ny lavaka milevina dia afaka mampihena be ny haben'ny PCB, mampihena ny isan'ny sosona, manatsara ny fifandraisan'ny elektrômanetika, mampitombo ny toetran'ny vokatra elektronika, mampihena ny vidiny ary manao ny endrika ihany koa miasa tsotra sy haingana kokoa. Amin'ny famolavolana sy fanodinana PCB nentim-paharazana dia mety hiteraka olana maro ny through-hole. Voalohany, mibodo habaka mahomby be izy ireo. Faharoa, be dia be ny lavaka be any amin'ny faritra matevina koa miteraka sakana lehibe amin'ny tariby misy ny sosona anatiny an'ny PCB maro sosona. Ireo lavaka lavaka ireo dia mibodo ny toerana ilaina amin'ny tariby, ary mamakivaky ny habaky ny herinaratra sy ny tariby tariby an-tany izy ireo, izay hanimba ny toetra mampiavaka ny sosona tariby tariby herinaratra ary hiteraka tsy fahombiazan'ny tariby mitondra tany. sosona. Ary ny fandavahana mekanika mahazatra dia 20 heny noho ny fampiasana teknolojia lavaka tsy misy lavaka.
Previous: 6 layer impedance fanaraha-maso tabilao mihetsiketsika amin'ny flexener
Manaraka: Saron-tava solder 3 oz mametaka takelaka varahina mavesatra ENEPIG